गणतन्त्र गणतन्त्र भनेर हुरुक्कै हुनेहरु यतिबेला जानिदो नजानिदो हिसावले यसलाई मास्न लागिपरेका देख्दा उदेक लाग्छ । हतारमा गल्ती गरेर फुर्सदमा पछुताउने भनेको यही हो । दुई तिहाईको सरकारले गणतन्त्रलाई अझ संस्थागत गर्दै देशलाई समुन्नत दिशातिर डोर्‍याउँछ भन्ने ठान्नेहरु निराश छन् र यो सरकार त िमलिजुली गठबन्धनको भन्दा पनि अझ खत्तम भयो भन्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । हुन पनि दुई तिहाईका दम्भमा बहुसंख्यक नेपालीले रुचाएनन् र यो सरकारले देखाएको क्रियाकलाप र जनतामाथि भार र समस्या थपेको देख्दा केपी ओली सरकारले नै गणतन्त्र सिध्याउने भो भनेको पनि सुन्न थालिएको छ । यो सरकार शान्तिपूर्ण तरिकाले काम गर्न छाडेर उन्मत्त भैरव बनिरहेको छ, उत्तेजित पारिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक संकट निम्त्याएर यो सरकारले आफ्नो अधिनायकत्व प्रदर्शन गरिसकेको छ ।
रेल, पानीजहाज, हावाबाट बत्तीदेखि लिएर कृष्णप्रसाद अधिकारी, डा.गोविन्द केसी, दीपकराज जोशी अनि बालकृष्ण ढुंगेलसम्मलाई एउटै बास्केटमा राखेर घोल्दा एउटै निचोड निस्कन्छ, त्यो हो– गणतन्त्र माथि प्रहार चौतर्फी रुपमा । कुन चाहिं प्रहारले ढल्ने हो ? अहिले त आधारभूमि तैयार हुँदैछ ।
अव पछिल्लो समय कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी प्करणलाई लिउँ । अमेरिकी मोडेलको संसदीय सुनवाई समिति, जुन समिति प्रधानमन्त्री र आआफ्ना पार्टीका अध्यक्षहरुको आदेश मान्छ, ले जसरी जोशीलाई अस्वीकृत गरेको छ, त्यो न्यायालयलाई मात्र प्रभावित गर्न होइन । पुरै सिस्टमलाई नै संकटग्रस्त पार्न पर्याप्त छ । अघि अघिका प्रधानन्यायाधीशरु जो संसदीय सुनवाई समितिबाट पास भएका थिए, तिनीहरु भन्दा यी जोशी कुन अर्थमा भिन्न छन् ? हो, यिनी नेकपाको नजिक नहोलान्, यिनी सरकारविरुद्ध फैसला गर्न नहिच्किचाउलान् । त्यत्ति त अघि अघिका सरकारले र त्यो संसदीय सुनवाई समिति भनाउँदोले पनि पचाएकै हो । बरिष्ठ को अधारमा इतरपक्षमा विश्वास राख्नेहरुले पनि चान्स पाएकै हुन् । अहिले चाहिं किन यो गलफत्ती ? उनले गरेको बिबादास्पद फैसला, जन्ममिति, प्रमाणपत्रको बिबादलाई त कतिपयले बिबाद नै मान्दैनन् । आफ्नै कर्मथलोमा कारवाहीमा परेर देशको दोस्रोठूलो व्यक्ति भएको प्रमाण हामीसँग छ । अझ तिनलाई संसद भवनमा सांसदहरुले क्लिन चिट दिएर दोस्रो ठूलो व्यक्ति बनाएका थिए । त्यो चाहिं
कसरी सम्भव भयो ? हिजो नियुक्ती दिदा, बढुवा हुँदा आँखा चिम्लने, अहिले सबै खोतल्ने ? यदि अयोग्य नै हुन भने हिजो उनलाई प्रकृया पुर्‍याएर सर्वोच्चको बरिष्ठ न्यायाधीश बनाउन निर्णय गनेृहरु को को हुन् ? तिनको छानबिन र कारवाही हुने कि नहुने ? जोशीले कार्ययोजना दिएनन्, उजुरी र प्रश्नको सही उत्तर दिएनन्, जन्ममिति विषयमा निराकरण हुनेगरी यथेष्ठ प्रमाण नदिएको, नेपालको न्याय प्रणालीलाई योगदान दिनसक्ने विश्वास नदिलाएकोजस्ता आरोप लगाइएको छ । प्रश्नकर्ताले जोशी प्रधानमन्त्री र प्रचण्डलाई भेट्न किन गएको भनेर सोधेनन् ? न्यायपरिषदमाथि पनि प्रश्न उठाएनन् । भोजमा आरोप लागेका व्यक्तिलाई किन निम्त्याएको भनेर पनि सोधेनन् ? मर्यादाबारे विचार गरेनन् । बुढाहरु हुन्जेल जन्ममिति र प्रमाणपत्रको समस्या आइरहन्छ । उमेर घटाएर जागीर खाने चलन पहिले थियो । बुढाहरुको समयमा एसएलसी बोर्डको नै ठेगान थिएन । जे आरोप लगाए पनि कांग्रेस निकटलाई बढारिएको अर्थमा धेरैले बुझेका छन् । नेकपाको सरकार अदालतमा निकट राख्न चाहन्छ । सरकारका नजरमा मालपोतको खरदार र प्रधानन्यायाधीशमा शायद खासै अन्तर रहेन अब । दम्भ हेरिसाध्ये नहुने भयो ।
यसरी कतिदिन चल्छ यो गणतन्त्र ?
कांग्रेस आन्दोलनमा उत्रिसक्यो । महगी र डा.कसी मुद्दा थियो, अव नेकपाको अधिनायकवाद मुद्दा बनेको छ । नेकपाको सरकारले सबै निकायलाई प्रदूषित पार्दैछ, संवैधानिक अंकका सबै पदहरुमा अनुकूलता सिर्जना गर्दैछ । सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त मिच्दैछ । मास्दैछ । विश्लेषण्कहरु भन्छन्– गणतन्त्र अरुले होइन, ओली सरकारको दुई तिहाईको अन्धबेगले समाप्त पार्नेभयो ।